Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy
Ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Trano kolotoraly malagasy mikarakara ny taom-baobao malagasy
Miova isan-taona ny daty. Homarihina sy hankalazaina ny 10 ka hatramin’ny 12 marsa 2013 ny taom-baovao malagasy. Ankoatra ny eny Ambohi- trabiby, izay niandohan’ ny taom-baovao malagasy tamin’ny andron-dRalambo, dia handray ireo hetsika rehetra amin’ity taona ity ihany koa ny kianjan’ Andohalo. «Hanana ny fanamarihany izany taom- baovao izany koa anefa ireo vohitra samihafa manerana ny Nosy ary hisy ihany koa ireo Malagasy any andafin’ ny riaka no hanamarika izany», hoy Randrianjatovo Henri, filohan’ny Trano kolotoraly Malagasy.
Toy ny isan-taona dia misy hatrany ny fanatanterahana ireo fomba amam- panao efa mahazatra, toy ny hasim-pidiovana, afo tsy maty, tso-drano, vary amin-dronono tondrahan- tantely ary ny Zara hasina.
Ho an’ny etsy amin’ ny kianjan’Andohalo dia fivoarana entin’ny taom-baovao malagasy ny fampa- hafantarana ny rehetra amin’ny alalan’ny vela-tseho ireo fomba amam-panao malagasy toy ny famadihana, famorana, fanorenana fanambadiana…
Ho hita ao anatin’izany koa ireo karazan-javamaniry fanao fanafody misy eto amintsika, ny tao trano malagasy sy ny heviny ary ny tantarany. Toy izany koa ny vary sy ny fiainan’ny Malagasy .
Andrasana amin’ity hetsika eny Andohalo ity ny fandraisan’anjaran’ ireo sekoly amin’ny fanehoana ny hevitry ny fihavanana fahiny sy ankehitriny amin’ny alalan’ ny sora-baventy.
Toy ny mahazatra,dia miara-dia hatrany amin’ ny fetin’ny taom-baovao malagasy ny kabary, vako-drazana sy ny dihy samihafa.
HIHODINA ANY IVELANY-Hanolotra faradoboka ho an’ ireo mpankafy azy i Vaiavy Chila(0)
Hanainga ny 11 desambra izao. Mialoha ny fitetezam- paritra hataony any Frantsa mandritra ny iray volana, dia hanolotra faradoboka ho an’ireo mpankafy azy etsy amin’ny Le Glacier Analakely i Vaiavy Chila, ny zoma 06 desambra. «Ity no seho farany eto an-tanindrazana amin’ity taona ity ka ho fanomezana fahafaham-po ireo mpankafy izay tsy afaka hamarana ny taona miaraka aminay no
MOZIKA MAFANA-Hankalaza ny tsingerin-taona nahaterahany eny an-tsehatra i Chenevar Playa(0)
Fankalazana misokatra amin’ireo namana sy havana ary ireo mpankafy. Amin’ny alalan’ny seho takariva izay hatolony ny zoma 6 desambra izao manomboka amin’ny 9 ora alina, eny amin’ny Jao’s Pub Ambohipo no hankalazan’i Chenevar Playa ny tsingerin- taona nahaterahany. Seho izay hanolorany indray ireo mozika mafana efa nahafantarana azy hatramin’izay. Mivoy ny karazana gadona rehetra i
KIANJAN’ANTANIKATSAKA-Foana noho ny antony ara-pahasalamana ny fampisehoan’i Maître Gims(0)
Tsy raikitra indray ny fampisehoana saika hotanterahan’ i Maître Gims rahampitso zoma eny amin’ny kianjan’ Antanikatsaka. «Ahemotra amin’ny fotoana manaraka izay mbola tsy voafetra ny fampisehoana», hoy ny fanazavan’i Grazianni Ramanandraitsiory, isan’ireo mpikarakara ny fampisehoana, tetsy Antaninarenina, omaly. «Noho ny antony ara-pahasalamana izay mahazo ny iray amin’ny fianakaviana akaiky ahy dia tsy afaka manatanteraka ireo
HIOVA FAMINDRA-Hitodi-doha amin’ny gadona rock i Silo(0)
Nilona naharitra tao anatin’ireo mozika ho an’ireo mpahay mozika. Hiova endrika ka hirona amin’ny hira ho an’ny besinimaro i Silo manomboka izao ary hitodika kokoa amin’ny gadona rock. Maro tamin’ ireo hira efa nahafantarana azy, araka izany, no nasiana fanamboarana teo amin’ ny fandrindra na natao nanaraka io gadona io. «Nisy ny rakikira navoakako izay tsy hita
HANKALAZA TSINGERINTAONA-Hampiray sehatra karazana kolo­tsaina maro ny «Basy gasy»(0)
Ao anatin’ny fanamarihana ny herintaona nijoroany, hampiray sehatra ireo karazana kolontsaina an-tanàn-dehibe maro ny fivondronana mpanakanto Basy Gasy. Etsy amin’ny Mojo etsy Antaninarenina no hanamarihana izany ny alin’ny alakamisy 05 desambra izao manomboka amin’ny 5 ora hariva. Mpanakanto maromaro samy manana ny talentany avy no handray anjara amin’ny hetsika, ahitana an-dry Lova Zen, Fly B, Skira, Nemesis, Bolo, Jesse… Ankoatra ny mozika izay hitety ireo karazana gadona samihafa,dia miainga amin’ny rap, reggae, ragga , jazz, electro… sy ireo kanto avy amin’ny teny toy ny Slam… anisan’ny tanjon’ny Basy Gasy hatramin’ny nijoroany ny fanomezana kolontsaina feno ho an’ny mpanatrika ka sady mahazo ny anjara tandrify azy ny sofina sy ny saina, no mahazo ny anjara fahafinaretany ihany koa ny maso. Anisan’ireo mpikambana ao anatin’ny Basy Gasy ihany koa ireo manan-talenta amin’ny seha-kanto hafa toy ny sokitra, saripika, hairaha araka endrika amam-bika… FR
Mpanoratra Rijakely, 02.02.2013, 09:24	FIARAHAMONINA
FITSABOANA-Ny roa ampahatelon’ny Malagasy no miaina lavitry ny tobim-pahasalamana(0)
TOETRY NY ANDRO-Mbola hitohy anio ny hatsiaka sy ny erika eto an-drenivohitra(0)
FITATERANA AN-DRENIVOHITRA-Miova lalana ireo taksibe noho ny fitohanan’ny fifamoivoizana(0)
Vu d’ailleurs	Lahatsoratra vaovao	TAPATAPANY
HIHODINA ANY IVELANY-Hanolotra faradoboka ho an’ ireo mpankafy azy i Vaiavy Chila
MOZIKA MAFANA-Hankalaza ny tsingerin-taona nahaterahany eny an-tsehatra i Chenevar Playa
KIANJAN’ANTANIKATSAKA-Foana noho ny antony ara-pahasalamana ny fampisehoan’i Maître Gims
HIOVA FAMINDRA-Hitodi-doha amin’ny gadona rock i Silo